रवि लामिछानेका नाममा पूर्वपत्नी इशा लामिछाने लेखिन यस्तो भावुक पत्र, जसले रसाए सबैका आखा — Sanchar Kendra
रवि लामिछानेका नाममा पूर्वपत्नी इशा लामिछाने लेखिन यस्तो भावुक पत्र, जसले रसाए सबैका आखा
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेकी पूर्वपत्नी इशा लामिछानेले रविका नाममा अमेरिकाबाट एउटा पत्र लेखेकी छिन । पत्रकार शालिकराम मृ’त्यु प्रकरणमा १० दिन हिरासत बसेर ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेको नाममा पत्र लेख्दै उनले आफूहरुको डिभोर्सपछि दुई छोरीहरुको एक्लो अभिभावकत्व आफ्नो काँधमा आएको बताएकी छिन । डिभोर्सपछि २ जनाको बाटो अलग-अलग भएर रविले नेपालमा नयाँ संसार बसाले पनि आफु भने अमेरिकामा छोरीहरुको सहारामा बाँचिरहेको बताएकी छिन। यस्तो छ उनले लेखेको पत्र जस्ताको त्यस्तै..
‘हुन त मैले यो विषयमा केही बोल्नु उचित नहोला भन्ने सोचेकी थिएँ । तर, पछिल्ला केही दिनमा मेरो एउटा स्टाटसलाई आधार बनाएर अड्कलकै आधारमा समाचारहरु आइरहेको देखेपछि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकी छु । रवि लामिछाने मैले २५ वर्ष सहयात्रा गरेका श्रीमान मात्र होइन, मेरा दुई छोरीका बाबु पनि हुन् । हाम्रो डिभोर्सपछि दुई छोरीहरुको एक्लो अभिभावकत्व मेरो काँधमा आएको छ । डिभोर्सपछि हाम्रो बाटो अलग-अलग भयो । उनले नेपालमा नयाँ संसार बसाले । म अमेरिकामा छोरीहरुको सहारामा र उनीहरुलाई सहारा दिएर बाँचिरहेकी छु । डिभोर्सका क्रममा रविले मसित केही कागजी र केही मौखिक प्रतिवद्धताहरु गरेका थिए ।
त्यसअनुसार अमेरिकामा रहेको घरको मासिक किस्ता भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी उनले लिएका थिए । तर, उनले नियमित रकम नपठाएपछि तीन महिना अगाडि बैंकले घर लिलामीको नोटिस निकाल्यो । त्यसपछि उनले पठाएको केही पैसा र म आफैंले बाँकी रकम जोहो गरेर बैंकको किस्ता क्लियर गरेँ । आगामी दिनमा उनले प्रतिवद्धता पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएकी छु । अन्यथा, मैले पनि कानूनी उपचारको खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । रवि पक्राउ परेको खबरले अमेरिकामा हामी आमाछोरी चिन्तित बन्यौं । खासगरी ठूली छोरी निकै दुःखी थिइन् । मलाई पनि ननिको लाग्यो ।तर, यतिबेला नेपालमा रविलाई अर्को संकटले घेरेको छ । आ’त्मह’त्या दुरु’त्सा’ह’नजस्तो गम्भीर मुद्दा लागेर पक्राउ परेर हालै पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुद्दाको फैसला भएको छैन ।
कागजीरुपमा सम्वन्ध अन्त्य भए पनि भावनात्मक सम्वन्ध नष्ट हुन समय लाग्दोरहेछ । सायद मैले आफ्नो मनबाट उनलाई पूर्णरुपमा निकाल्न सकेकी थिइनँ । त्यसैले उनलाई यो विपत्ति आइलाग्दा म बेचैन बनेँ । तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि उत्तिकै संवेदनशील थियो । अर्को पाटोमा मजस्तै एक स्त्रीको सिउँदो पुछिएको थियो । र, उनका श्रीमानले मर्नेबेलामा रुँदै-रुँदै आफूलाई आ’त्म’ह’त्या गर्न विवश तुल्याएको भनेर रविको नाम लिइरहेका थिए । भिडियो हेरेपछि म निकै सोचमा परेँ । के धेरै मानिसहरुका लागि भगवान बनेको रविबाट कसैलाई आ’त्म’ह’त्यासम्म धकेल्ने दानवीय कर्म भयो होला ? मैले अझै पत्याउन सकेको छैन ।
यस घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अन्तिम निचोड निकाल्ने उसैको जिम्मेवारी हो । एउटा भिडियोलाई मात्रै आधार मानेर पक्कै पनि प्रहरीले र अदालतले निर्णय लिँदैन होला । भिडियोमा दिइएको वयान कति सत्य हो भनेर पत्ता लगाउने अन्य प्रमाणहरु जुटाइएलान् । र, अन्त्यमा सत्यता बाहिर आउला । म त यति मात्रै कामना गर्छु कि भिडियोमा बोलिएको कुरा सत्य सावित नहोस र रवि निर्दोष प्रमाणित होउन् । तर, मेरो कामनाले भन्दा पनि रविलाई उनकै कर्मले जोगाउने हो । यदि गलत काम गरेका छैनन् भने नखाएको विष पक्कै नलाग्ला । यदि शालिकरामले लगाएको आरोप सत्य ठहरियो भने रविका हजारौं प्रशंसकजस्तै म पनि निराश हुनेछु । भिडियोमा रविमाथि मृतक शालिकरामले लगाएको अर्को आरोपले पनि मलाई उत्तिकै स्तब्ध बनाएको छ ।
रविले सिधा कुरा कार्यक्रम चलाउँदा मानिसहरुबाट करोडौं रकम असुल गरेको आरोप मृतकले लगाउनुभएको छ । मैले २५ वर्ष रविसँग दाम्पत्य सम्वन्धमा रहेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा उनी यसअघि आफ्नो काममा जहिले पनि इमान्दार र प्रतिवद्ध थिए । अमेरिकामा रहँदा पनि धेरै नेपालीलाई निस्वार्थ सहयोग गरेका हुन् । सिधा कुरा जनतासँग मार्फत पनि थुप्रैको उपकार गरेको सुनेकी छु । तर, उनीमाथि उनकै पूर्वसहकर्मीले पैसा खाएको आरोप लगाइरहँदा त्यसले मलाई अचम्म बनाएको छ । रविबाट यस्तो काम भयो होला भन्ने विश्वास लाग्दैन । एउटा श्रीमतीका रुपमा मलाई रविलाई दिएका चोटहरु असंख्य होलान् । त्यो सम्झनेबेला अहिले होइन ।
रवि हिरासतबाट निस्के पनि दोषमुक्त भएका छैनन् । म चाहन्छु- अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयलाई किनारा लगाओस् र वास्तविक तथ्यलाई बाहिर ल्याओस् । शालिकरामकी पत्नी सम्झनाले न्याय पाउन् । यदि निर्दोष भए रविले पनि न्याय पाउन् । हिजो बुवाको मुख हेर्ने दिन । अघिल्ला वर्षमा छोरीहरु यस दिन कति उत्साहित हुन्थे । मेरा छोरीहरुका पितालाई ‘फादर्स डे’ को शुभकामना छ । आफ्नो संसारमा भुलेर छोरीहरुलाई बिर्सियौ भने पनि छोरीहरुले तिमीलाई कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन् । किनकी एकपटकको बाबु सधैंको बाबु हो । ‘पूर्वश्रीमान’ भनेजस्तो ‘पूर्वबाबु’ वा ‘पूर्वछोरी’ कहिल्यै हुँदैन ।’
इशा लामिछानेको पत्र समयसान्दर्भिक लागेकोले हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौ । जसको लिंक यहाँ राखिएको छ । (https://www.onlinekhabar.com/2019/08/792464 )
यता रवि लामिछानेविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा पनि मुद्धा परेको छ । दिलिपसिंह विष्टका दाई खड्क बिष्टले रवि लामिछाने, सीआईबीका तत्कालीन डिएसपी अंगुर जिसी र न्यूज २४ टेलिभिजनविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् । दिलिप विष्टलाई निर्मला बला’त्का’र–ह’त्या प्ररकणमा प्र’हरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । घटनामा संलग्न भन्दै सार्वजनिक समेत गरिएको थियो । तर, डिएनए नमिलेपछि उनी हिरासतमुक्त भएका थिए । दिलिपको अनुसन्धान तत्कालीन सीआईबीका डिएसपी जिसीले नै गरेका थिए । जिसीले उनीसँग लिएको भिडियो बयान सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।
निर्मलाको बला’त्का’रपछि ह’त्या भएको एक वर्षपछि लामिछानेले न्यूज २४ बाट प्रशारण हुने ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा दिलिपको त्यही भिडियो प्रशारण गरेका थिए भने सोही कार्यक्रममा जिसीले दिलिप नै निर्मलाको बलात्कार तथा हत्यमा संलग्न रहेको दाबी गरेका थिए । दिलिपबाहेक अर्काे मान्छे हुनै नसक्ने उनले दाबी गरेका थिए । अनुसन्धानपछि घटनामा संलग्न नदेखिएर प्रहरीले छोडका व्यक्तिका विषयमा भ्रम हुनेगरि टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रशारण गरेको तथा निलम्बित डिएसपी जिसीले मानमर्दन हुने काम गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मानहानीको मुद्धा दायर भएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यति मात्र होइन, लामिछानेले निर्मला प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहेका पत्रकार खेम भण्डारीको समेत कार्यक्रमको अर्काे अंकमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । सोही कार्यक्रममा पनि दिलिप नै दोषी भएको र उनलाई भण्डारीले जोगाउन खोजेको भन्ने आशयबाट ‘चर्काचर्की’ भएको थियो । कार्यक्रममा निलम्बित डिएसपी पनि सहभागी थिए । आफूलाई जानकारी नदिई उनलाई सहभागी गराइएको पत्रकार भण्डारीको आरोप छ ।
यसअघि लामिछाने बिरुद्ध कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीले मिडिया काउन्सील नेपालमा उजुरी दर्ता गरेका छन। २३ दिनअघि मात्रै उनले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त बला’त्का’र पछिको ह’त्याको विषयमा अतिरञ्जित गरेको भन्दै कार्बाहीको माग गरेका छन । पत्रकार भण्डारीले लामिछानेलाई पत्रकार आचार संहिता विपरित काम गरेको भन्दै मिडिया काउन्सिल समक्ष हदैसम्मको कार्बाहीको माग गरेका छन ।
‘…रवि लामिछानेले पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता, विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित आचारसंहिता तथा देशभित्रकै आचारसंहिताको नग्न उल्लंघन गर्दै मलाई बदनाम गर्ने तथा निर्मला प्रकरणलाई दवाउन भइरहेका विभिन्न प्रयासलाई सघाउने काममा मतियारको भूमिका गरेका छन्,’ भण्डारीले काउन्सिलमा दर्ता गरेको उजुरीमा भनेका छन् । निर्मला पन्तको बला’त्का’रपछि हत्या प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेर साउन २१ गते प्रसारित कार्यक्रममा आफूलाई मात्र ‘गेस्ट’को रुपमा बोलाउनुपर्ने शर्तको उल्लंघन गरिएको पनि भण्डारीको आरोप छ ।
भण्डारीका अनुसार ‘सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम’को टिमले २०७६ साउन ११ गतेबाट निर्मला प्रकरणकाबारे सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो । १६ साउन २०७६ को कार्यक्रममा आफ्ना फेसबुक स्टाटस तथा आफू सम्पादक रहेको अखबारका विषयलाई लिएर असन्तुलित तथा एकतर्फी सामग्री प्रस्तुत गरिएको पनि भण्डारीको आरोप छ ।
१. २०७५ साल श्रावण ११ गते बलात्कारपछि मृ’त अवस्थामा भेटिएकी जिल्ला कञ्चनपुर भीनपा–२ उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तका बारे म निवेदकले निरन्तर रुपमा लेख्दै आएको छु । सम्पूर्णतः तथ्यमा आधारित भएर मैले प्रहरी अनुसन्धानमा भएका त्रुटी तथा सो घटनाका दोषीलाई बचाउने नियतका साथ निर्दोषलाई फसाउने विभिन्न प्रयासको विरोध गरेको छु । मैले नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समिति तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै कलम चलाउँदै आएको छु । मैले सो प्रकरणमा प्रचलित कानुन तथा पत्रकार आचारसंहिताको कहिंकतै उल्लंघन गरेको छैन ।
(क) दर्शकहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनी मैले तयार गरेका सामग्री निर्धारित कार्यक्रमभन्दा एक दिन पहिले नै मैले मेरो इमेलबाट गुगल ड्राइभ प्रयोग गरी कार्यक्रमका उत्पादक दीपक बोहराको इमेलमा पठाएको थिएँ । विपक्षीहरुले व्यावसायिक आचरणविरुद्ध तत्काल मेरा इमेल निर्मला प्रकरणमा निलम्बित तथा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा यातना तथा प्रमाण नष्ट सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीलाई फरवार्ड गरिदिएका रहेछन् । निज जिसीले गुगल ड्राइभमा ‘एक्सेस’ माग्दा गैरव्यावसायिक तरिकाले इमेल फरवार्ड गरिएको मैले थाहा पाएँ । सोको सबै प्रमाण यसैसाथ संलग्न छ । विपक्षीहरुको यस्तो व्यवहारले पत्रकारितालाई विचौलिया धन्दाका रुपमा प्रयोग गरेको मेरो ठम्याई छ ।(ख) पूर्वशर्त अनुसार सो अंकको पूरै समय म एक्लैलाई प्रदान गरिनुपर्नेमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब १० मिनेटसम्म पनि लुकाएर अकस्मात स्टुडियोमा निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीलाई उपस्थित गराइयो । जुन आरोपमा जिसी निलम्बित भएका हुन् र जुन अभियोगमा उनीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ सोही विषयको विज्ञका रुपमा चोरबाटोबाट जिसीलाई कार्यक्रममा प्रवेश गराइयो । यो पत्रकारिताको इतिहासमैं जघन्य र निकृष्ट तथा गैरव्यावसायिक हर्कत हो । यसबाट नेपाली पत्रकारिताको निधारमा कलंक लागेको मेरो ठम्याई छ ।